पटक-पटक पिसाब आउने गर्दछ ? त्यसो हो भने तपाइँ यस्तो समस्या बाट पिडित बन्नुहुनेछ - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / पटक-पटक पिसाब आउने गर्दछ ? त्यसो हो भने तपाइँ यस्तो समस्या बाट पिडित बन्नुहुनेछ
पटक-पटक पिसाब आउने गर्दछ ? त्यसो हो भने तपाइँ यस्तो समस्या बाट पिडित बन्नुहुनेछ
धेरै पानि पिउदा पनि कहिले कहिं पटक-पटक पिसाब लाग्छ । यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन । तर, सामान्य अवस्थामा पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने, त्यसले शारीरिक समस्याको संकेत गर्छ । के भनिन्छ भने, पिसाब कति पटक फेरिन्छ भन्ने कुराले समेत हामी कति स्वस्थ्य वा अस्वस्थ्य छौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ । हाम्रो जीवनशैली वा स्वास्थ्य खराब भएमा पटक-पटक पिसाब लाग्न सक्छ ।
हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएकाे छाै :
पिसाब पोल्ने समस्या छ ? यसरी समाधान गर्नुहाेस्
यदि तपाईलाई पिसाव राम्रो संग खुलेर नआउने अथवा पोल्ने समस्या छ भने त्यसको कारण यौनरोगको संक्रमण,कुनै विष वा कडा औषधिका कारण मृगौला सुन्निनु अथवा पत्थरी भएको पनि हुन सक्छ । तपाईलाई बढी मात्रामा पिसाव पोल्ने समस्या छ भने त्यसको रोकथामका लागि गरिने घरेलु उपायहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
बोटैमा पाकेको अर्गा्निक आप १ हप्ता सम्म दिनको दुइवटा सेवन गर्नाले धेरै पिसाबका रोगहरु निको हुन्छन् ।
गाजरको रस साँझ बिहान १,१ गिलास सेवन गर्नाले पिसाव पोल्न कम हुन्छ ।
दुई चम्चा धनिया बेलुका भिजाउने र बिहान उठेर मिश्रीसँग सेवन गर्नाले पनि पिसाव पोल्न कम हुन्छ ।
पिसाव पोल्ने रोगीले प्रशस्त पानी पिउनुका साथै छारयुक्त पदार्थको सेवन गर्ने ।
हर्रो बर्रो र अमला चूर्णं एक गिलास पानीमा बेलुका भिजाइ बिहान बिहान सेवन गर्ने गरेमा पनि पिसाव पोल्न कम हुन्छ ।
दत्तिवनका केही पात वा डाँठहरुलाई पानीमा पकाउने र त्यसमा हर्रो बर्रो र अमला चूर्ण समेत मिलाइ नियमित १५ दिन सेवन गरेमा पिसाव सम्वन्धि धेरै बिरामी निको हुन्छ ।
गर्मि मौसममा पानी प्रसस्त खाएन भने पिसाब पोल्ने समस्याले सताइ रहन्छ । यस्ता समस्याबाट बच्न यी घरेलु उपचार बिधी अपनाउनुहोस्
दुधमा मिश्रीको मिश्रण बनाएर पिउदा पनि यो समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
केहि दिनसम्म फिटकिरीमा थोरै पानी मिसाएर दिनमा दुई तीन पटक पिउनुपर्छ ।
८० ग्राम गहुँको दानालाई भिजाएर बिहान थोरै मिश्री मिसाएर नियमित पिउनाले पनि राहत मिल्छ ।
गाजरको जुस नियमित पिउने गर्नुपर्छ ।
दुधमा सुकुमेलको पाउडर मिसाएर पिउने गर्नुपर्छ ।
केहि समयसम्म मनतातो पानी सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
पिसाब रोक्दा निम्तिन सक्छन् यी समस्याहरु
पिसाब शरीरको सामान्य प्रक्रिया हो । पसिनाजस्तै पिसाबका माध्यमबाट पनि शरीरका लागि अनावश्यक तत्वहरु बाहिर निस्कन्छन् । जसलाई महसुस भएको एकदेखि दुई मिनेटभित्र फ्याँक्नुपर्छ ।
पिसाब थैली भरिनेबित्तिकै स्नायुप्रणालीले त्यसको संकेत मष्तिष्कमा पुर्याउँछ र पिसाब फेर्न मन लाग्छ । यदि पिसाब थोरै समय पनि रोकियो भने संक्रमण सुरुवात हुन्छ । पिसाब रोक्दा कस्ता समस्या निम्तन्छन् त ?
मानिसहरु पिसाब केही मिनेटका लागि या लामो समयसम्म रोकेर राख्छन् । तपाईं पिसाब कतिबेर राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा पिसाबको उत्पादनमा भर पर्छ । यसका अलावा तरल पदार्थको उपभोग या पिसाब थैलीको कार्यक्षमतामा भर पर्छ ।
जति बढी समय तपाईं पिसाब रोकेर राख्नुहुन्छ, तपाईंको पिसाब थैलीमा उति बढी ब्याक्टेरिया विकसित हुन्छ र स्वास्थ्य जोखिमको कारण बन्न जान्छ ।
पिसाबलाई एकदेखि दुई घण्टासम्म रोक्नाले महिला वा कामकाजी युवामा पिसाबसम्बन्धी समस्या देखिन थाल्छ । जसअन्तर्गत सुरुमा पिसाब थैलीमा पीडा हुन्छ । पिसाब जतिबेर रोकेपनि त्यस क्रममा मिर्गौलाबाट पिसाब थैलीमा जम्मा भइरहेको हुन्छ ।
हरेक एक मिनेटमा दुई मिलिलिटर पिसाब थैलीमा पुग्छ, जसलाई प्रति एकदेखि दुई घण्टामा खाली गरिरहनुपर्छ । थैली खाली गर्न तीनदेखि चार मिनेटसम्म पनि ढिला गर्याे भने पिसाब फेरि मिर्गौलामै फर्कन थाल्छ । यसको परिणाम पत्थरीको सुरुवात हुन सक्छ, किनकि पिसाबमा युरिया र अमिनो एसिडजस्ता हानिकारक तत्व हुन्छन् ।
कहिल्यै पनि पिसाब गरिरहेको बेलामा हठात् रोक्नुहुन्न । पिसाब लाग्नेबित्तिकै शौचालय जानुपर्छ । अन्यथा मुत्रमार्ग संक्रमण (युरिनरि ट्राक्ट इन्फेक्सन या युटिआई) हुने खतरा बढ्छ । पिसाब रोकिँदा यस्तो संक्रमण फैलन्छ । सामान्यतः महिलाहरुमा मुत्रमार्गमा संक्रमण बढी हुन्छ । यो जिवाणुजन्य संक्रमण हो, जसमा मुत्रमार्गको कुनै पनि भाग प्रभावित हुन सक्छ ।
१. इन्टस्र्टिशल सिस्टाइटिस
यो एक पीडादायी ब्लाडर सिन्ड्रोम हो, जसका कारण पिसाब थैली सुन्निन सक्छ र पीडा हुन्छ । इन्टस्र्टिशल सिस्टाइटिसबाट पीडित मानिसलाई पटक–पटक पिसाब लाग्छ । तर, पिसाब भने कम आउँछ ।
अहिलेसम्म यसको खास कारण पत्ता लाग्न नसकेपनि डाक्टरहरुका अनुसार यो जिवाणुको संक्रमणकै कारणबाट हुन्छ । यस्ता बिरामीहरु कोही त दिनमा ६० पटकसम्म पनि पिसाब गर्न जान्छन् । यसको पूर्णतः निमुल पार्ने उपाय छैन । तर, उपचारबाट लक्षण कम गर्न सकिन्छ ।
पिसाबसंग सम्बन्धित हरेक प्रकारको संक्रमणले मिर्गौलामा नराम्रो असर पु¥याउँछ । शरीरमा युरिया तथा क्रियटिनिन दुवै तत्व बढ्नाले पिसाबबाट बाहिर निस्कन पाउँदैंन । जसको परिणाम ती तत्व रगतमा फैलन थाल्छन् ।
यसबाट भोक कम लाग्नु, बान्ता हुनु, कमजोरी हुनु, थकाई लाग्नु, सामान्यभन्दा कम पिसाब आउनु र शरीरका भागहरु सुन्निनुजस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
३. पिसाबको रंग गाढा हुन्छ
लामो समयसम्म पिसाब रोक्नाले पिसाबको रंग अलि गाढा हुन्छ । यसरी गाढा हुने कारण पनि संक्रमण नै हो । केही खाद्यपदार्थको स्ेवनले पनि पिसाबको रंग गाढा हुन्छ । भिटामिन बीले पिसाबको रंग रातो बनाउछ ।
४. पिसाबथैलीको मांसपेशी कमजोर हुन्छ
यदि पिसाब लागेको तीनदेखि चार मिनेटसम्म पनि खाली गरिएन भने पिसाबको टक्सिक तत्व मिर्गौलामा फर्कन्छ, जसलाई रिटेन्सन अफ युरिन भनिन्छ । यसका अलावा पिसाब पटक–पटक रोक्नाले पिसाब थैलीको मांसपेशी कमजोर हुन्छ ।
मानिसको शरिर पनि अचम्मको हुन्छ । शरिरको कुनै भागमा देखिएको केहि फरक चित्रले शरिरमा भएको परिवर्तनको संकेत गर्छ । जस्तै पिसाबको रंग विचार गर्नुहोस् । पिसाबको रंग शरिरको अवस्था अनुसार फरक फरक हुन्छ । यसैले, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने पिसाबको रंगले शरिरमा भएको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।
यो लेखमा पिसाबको रंगले शरिरमा भएको कस्तो परिवर्तन अथवा रोगको संकेत गर्छ भन्ने हामी यहाँ जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
रंगहिन पारदर्शी पिसाब
यदि तपाईको पिसाब रंगहिन पारदर्शी छ भने यो पनि राम्रो संकेत भने होइन । यसको अर्थ हो तपाईले धेरै पानी पिउँनु भएको छ र पानीको मात्रा घटाउँनु पर्ने भएको छ ।
कतिपयलाई के भ्रम छ भने पानी झै रंगहिन पिसाब हुनु राम्रो कुरा हो तर यो गलत हो । किनकि, भनाई नै छ अतिले खति गर्छ । पिसाब सामान्य अवस्थामा पिसाब जस्तै हुनु पर्छ ।
एकदमै बढि पानी पिउँदा किड्नीले रगत छान्न पाउँदैन र रगत शुद्ध हुन समस्या हुन्छ ।
फिक्का पराल रंग
स्वास्थ्य मानिसको पिसाब फिक्का पराल रंगको हुन्छ । यसले तपाईको स्वास्थ्य ठिक छ र पानीको मात्रा पनि ठिक्क छ ।
तपाईको स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा छ तर तपाईको शरिरमा पानीको मात्रा अलिक कम छ । पानीको मात्रा हलुका बढाउँनुहोस् ।
महको जस्तो रंगको पिसाब आउँनुको अर्थ हो, तपाईको शरिरमा पानीको अभाव भएको छ । प्रशस्त पानी पिउँनुहोस् ।
खैरो जाँड रंग
तपाईको कलेजोमा समस्या भएको हुन सक्छ अथवा नीर्जलिकरण भएको हुन सक्छ । प्रशस्त पानी पिउँनुहोस् ।
के तपाईले ऐसेलु वा काफल खानु भएको थियो ? होइन भने, तपाईको पिसाबमा रगत आएको हुन सक्छ वा यसले मृगौलाको समस्यालाई संकेत गरेको हुन सक्छ । त्यसैले तुरुन्तै अस्पताल गइ चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् ।
यस्तो रंगको पिसाबले दुइवटा कुरा संकेत गर्छ । पहिलो, तपाईले पर्याप्त पानी पिउँनु भएको छैन । दोस्रो, तपाईको कलेज खराब भएको हुन सक्छ । तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् ।
हरियो अथवा निलो रंग
यस्तो रंगिन पिसाब आउँनु दुर्लभ अनुवांशिक समस्या पनि हुन सक्छ । आफ्नो परिवारमा अरु कसैलाई यस्तो भएको थियो कि थिएन भनेर सोधिखोजी गर्नुहोस् । कुनै व्याक्टेरियल इन्फेक्सन वा औषधीका कारणले पनि यस्तो हुन सक्छ ।
जुन अवस्थामापनि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।
चिन्ता नलिनुहोस्, यस्तो वैजनी रंगको पिसाब कहिलै देखिदैन । वरिपरीको प्रकाशको कारणले यस्तो देखिएको हुन सक्छ ।
तपाईको खानामा प्रोटिनको मात्रा बढि भएका पिसाबमा बढि फिँज देखिन्छ तर सँधै जसो पिसाबमा फिंज देखिन थाल्यो भने चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
टाउको दुख्ने समस्या छ ? झुकिएर पनि नखानुस् यी चिज
करेलाको बियाँका पाँच फाइदा
उच्च रक्तचाप : औषधि खाने कि जीवनशैली बदल्ने ?
यस्ता छन् सोयाबीन खानुका फाइदा
१.इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा हरियो बत्ती
२.निरन्तर घट्दा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयर किन्न चाहनेको संख्या ३ गुणा !
३.निफ्राको सेयर कारोबारमा आज भएको के हो? निफ्रा अब घाटामा जाला त ?
४.सेयर बजारमा निफ्राको ९० करोडको सेयर किनबेच, दुई सातामा तीन अर्ब ४३ करोडको कारोबार
५.निफ्रा भ्रम कि यथार्थः लगानीकर्ताले थाहा पाउनैपर्ने यस्तो छ वास्तविकता
६.ज्योति लाइफको आईपीओ आउने मिती तयार (जानकारी सहित)
७.०७८ सालमा तीनवटा दशैँ , असोज २९ गते विजयादशमी
८.तोकिएको मिति अगावै आउने भयो ज्योति लाइफको आईपीओ